Bolivia: Andro 2-n’ny Fampivondronana Conectándonos · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2011 10:32 GMT
Ampahany amin'ny famintinana ny hetsika Conectándonos. Vakio eto ny momba ny Andro 1 .
Ny andro faharoan'ny Fampivondronana Conectándonos (Connecting) natao tao Cochabamba, Bolivia, dia natokana manontolo ho atrikasa fampiharana nomena endrika BarCamp. Nandritry ny fotoam-pamarànana ny andro teo aloha, dia nanontany ireo mpandray anjara ny mpandrindra mikasika izay zavatra tiany hianarana sy ny teknika mbola tiany hatsaraina. Nifototra tamin'ny valim-panontaniana sy ny tamberina avy amin”izy ireo, nomanina ho an'ny andro manaraka ireo atrikasa ireo , miaraka aminà filefahana kokoa arakaraky ny filàna fanampiny mety hipongatra .
Fotoanan'ny "BarCamp". Sary avy amin'i Juan Espinoza.
Nisafidy tamin'ireo karazana atrikasa telo izay natao tamin'ny fotoana mitovy tao amin'ny efitrano malalaka fakàna aina ireo mpandray anjara, izay nahafahan'izy ireo nifandray tamin'ny alàlan'ny “wi-fi” na tao amin'ny efitrano voaomana natokana ho an'ny solosaina. Ny sasany tamin'ireo atrikasa dia nahitàna:
Famoahana Lahatsary amin'ny fampiasàna ny Free Software (Rindrambaiko Malalaka)
Fomba fanoratra amin'ny Aterineto
Fampiasàna ny Findainao handefasana Bitsika
Ny Creative Commons sy ny Fametrahana Lisansa amin'ny Votoatin-javatrao.
Ny Fitaovan'ny Haino aman-jerin'olon-tsotra ho fandrisihana ny Fampiasàna ny Fiten'ny Vondrom-piaraha-monina Vazimba Teratany
Fandefasana Mivantana ny Hetsika ao anaty Aterineto
Ohatra, ao anatin'ny atrikasa mikasika ny fomba fanombohana ny fampiasàna ny haino amn-jerin'olon-tsotra ho làlana iray mba hampitomboana lanja ny teny nentin-drazana, i Ruben Hilare avy ao amin'ny tetikasa ” Jaqi Aru ” dia nanomboka ny adihevitra tamin'ny sasantsasany amin'ny lalàna Boliviana vaovao izay mangataka ny hanomezana lanja kokoa sy hampiasàna ireo fiten'ny vondrom-piaraha-monina vazimba teratany miisa 36 ao Bolivia. Nampiseho fiteny miisa dimy tamin'ireo ny mpandray anjara tonga tao amin'ilay atrikasa: Aymara, Quechua, Chiquitano (Bésiro), Guaraní, ary Guarayo. Nizara ny traikefa nananany manokana izy ireo na nampiasa na tsia ny fiteniny tao anaty aterineto ary ny toeran'ireo fiteny ireo amin'izao fotoana.
Fotoan'ny "BarCamp". Sary avy amin'ny Juan Espinoza.
Ny ankamaroan'ireo mpandray anjara dia namaritra ny fahaiza-manaon-dry zareo eo amin'ny lafiny media niomerika ho toy ny mpiana-draharaha na nahita rirany kely, noho izany ho an'ny maro, dia tsy nitrandraka ireo fitaovana ireo araka ny tena tokony ho izy ry zareo. Ny fahafahana mihazona atrikasa miaraka aminà mpandray anjara miisa 10-15 eo ho eo dia nahafahana nametraka fisampikasohana bebe kokoa sy fahafahana mametraka fanontaniana maro. Tamin'ny tranga sasany, dia afaka nandray fanampiana manokana ny tsirairay nandritry ireo fiatoana kely sy ny ora fisakafoanana.
Ho fanampin'ireo atrikasa izay nifantoka tanteraka tamin'ny fampiasàna ny fitaovana niomerika manokana, dia nisy ihany koa atrikasa iray momba ny maha zava-dehibe ny toe-tsaina mpandraharaha izay nantsoina hoe ny “Tsy voatery ho teny ratsy akory ny fanandratan-tena manokana” izay misy ifandraisany amin'ny fandavorariana ny tetikasa fampandrosoana ny haino aman-jerin'olon-tsotra. Maro ny ohatra ao amin'ny fiaraha-monina Boliviana, asa tena sarotra tokoa ny miresaka ny fahafaha-manaon'ny tsirairay sy ny hatsaràny, satria ny sasany tsy te-horaisina hoe dedaka sy mpieboebo. Kanefa na dia izany aza, rehefa nanandrana ny hikarakara tetikasa iray , dia tena zava-dehibe tokoa ny fahafahana manazava tsara ny tanjon'ilay tetikasa sy ny antony mahatonga an-dranona ho ny olona afaka manatontosa azy. Ireo mpitarika ny atrikasa dia nifantoka tamin'ny fanampiana ireo mpandray anjara mba hanatsara ny fahaiza-manaony ara-barotra amin'ny alalan'ny fanazàrana toy ny fiakatry ny fanani-drihana ary ny fanoràtana fanentanana manokana momba ny fahaizan'olona iray.
Ireo atrikasa “BarCamp” ireo dia dingana iray voalohany tena tsara mankany amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpandray anjara amin'ny fampiasàna ny media niomerika, kanefa ihany koa amin'ny fanajariana sy fanatontosàna tetikasa . Maro no naneho hevitra fa tena mba naniry ny hanatrika ny fotoana rehetra, nefa noho ny faneren'ny fotoana dia atrikasa dimy monja no afaka natao nandritry ilay Fampivondronana.
Ampahany amin'ny famintinana ny hetsiky ny Conectándonos. Vakio eto ny mahakasika ny